Thenga iipassports - I-C Cards - iimvume zokuhlala - ilayisensi yokuqhuba imali
Thenga i-Passport Online
Thenga iiMvume zokuHlala
Thenga Ilayisenisi yokuThuthukisa ye-Inthanethi Online
Thenga iVisa kunye ne-SSN Online
Ulwahlulo phakathi kweNkohliso kunye neNene
I-Bitcoin Eyathengiswa Ngomlinganiselo Olungileyo
I-Shop yakho ye-Intanethi yeeNgxelo eziNene neNkohliso
Siyavelisa, senze kwaye sithengise amaxwebhu oqobo kunye neenkohliso ongazisebenzisayo ukusebenza kunye nokuhamba naphi na kwihlabathi. Qinisekisa ukuba xa uyala umqulu wangempela, kuya kuba yi-100% evumelekileyo kwaye ibhaliswe kwiziko lekarhulumente ngokubhekiselele kuzo zonke iimfuno. Ngokubhekiselele kumaphepha e-fake, ayenziwa ngokucacileyo kwi-original kwaye angasetyenziselwa ukusebenzela nokuhamba kodwa engozini yakho. Ngoko siyancomela ngamandla bonke abathengi bethu ukuba bathenge amaxwebhu okwenene ukuze baphephe iingxaki zomthetho. at universalocumentation.com unokufumana nantoni na into oyifunayo kumakhadi ezokhuseleko loluntu kunye nezatifikethi zokuzalwa ukuya kwiiyunivesithi kunye nezitifiketi zomtshato.
Yonke idatha i-bio-metric ibhaliswe nge-microphone ye-RFID (i-Radio-Frequency IDentification) kwaye sinokuthatha iintsuku ze-3-10 zoshishino ukuvelisa kuwe nawuphi na umqulu (okanye) owenene welizwe oza kukunceda ube nelithuba lesibini ebomini ngolwazi olutsha, luyakwazi ukukhusela ubumfihlo bakho, ukwakha imbali entsha yeebhanki, ukupasa i-background background checks, ukubuyisela inkululeko yakho njl.
IINKONZO ZETHU EZIPHUMA
At Uxwebhu lweSizwe, Senza inkqubo kwaye sivelise isicelo sePassports sangempela kunye nefakeko, iiCampisi zeeDiskithi, iiCadi zeeNgcaciso, izitampu, iVisa, iiDiploma zesikolo, zithengela ilayisenisi yokuqhuba inkohliso, zithengele iifayili zokungena kwi-Intanethi, zithenge amakhadi e-fake kwi-intanethi, uthenge i-visa yangempela kwi-intanethi, ithenge bathenge i-passport ye-intanethi, bathenge i-passport zangempela kwi-intanethi, bathenge amakhadi e-intanethi yangempela kwi-intanethi, bathengise imvume yokuhlala yangempela kunye nenkohliso kwi-intanethi, bathenge i-visa zangempela kwi-intanethi ilayisenisi yokuqhuba, ilayisenisi yokuqhuba inkohliso, uthenge i-passport zangempela, uthenge ilayisenisi yokuqhubela i-intanethi, uthenge ilayisenisi yokuqhubela i-german yokuthenga, uthenge imali engamanga, uthenge ezininzi zeefake, iifasports zokukhohlisa, ukuthenga ipasipoti, ukuba ungayifumana njani ipasipoti, iifasipoti ze-fake zaseMelika, ilayisenisi yokuqhubela i-American, i-passport yokuthengisa inkohliso, ukuthengwa kwamaxwebhu angama-fake, ukuthengwa kweepassports, ukuthenga ilayisenisi yokuqhuba, ukufumana ilayisenisi yokuqhuba inthanethi, ndingayifumana inkohliso ikhadi lesazisi kwi-intanethi, iwebhusayithi ye-passports engabalulekanga
IiKhowudi zeMvume zokuHlala
Singabantu abalungileyo abenzi bokunyaniseka kwizinto ezilungileyo ezisemgangathweni eziBhalisiweyo eziMgangatho oPhezulu oPhezulu oMgangatho oPhezulu / oPhezulu lweeNgcaciso zeeNdawo zokuThumela, iiLayisenisi zokuTshayela, iiKhadi leAzisi kunye namanye amaxwebhu. Ukuthengwa kweeMpahla eziPhezulu zeMatriki eziBhalisiweyo eziFundekayo, eziVimbayo zokuVala iziKhulu zoLwazi, iiLayisenisi zabaqhubi, amakhadi e-ID, iiPassports kunye noBuchule bamaZiko.
IiPassports zangempela kunye neNkohliso
Ukuthenga Okwenene kunye nenkohlakalo yethu Isicelo sePasipoti kwi-Intanethi Thenga i-Passports Online Ngaba uyazi ukuba ngoku ungathenga ngokusemthethweni ipasipoti uze ufumane ubemi belizwe elinye ngaphandle kweyakho? Uyazi ukuba amashumi amawaka
Sinyathelisa kwaye sithengisa Bakala A mabhanki kwii-52 zelizwe kwilizwe. Imali yethu iphinda iveliswe ngokugqibeleleyo, Ingabonakaliyo kwiso kunye nokuthintela. Sithumela ngobungakanani obukhulu, bepakishwe kwaye bafihlekile. Zonke iibhanki zamabhanki ezikhohlisayo zithwala zonke iihologram kunye namanqaku amanzi kwaye zidlulisa ukuhlolwa komtshini wokukhanya. Sithumela umhlaba jikelele kunye nokuhanjiswa kwindlu yakho ngaphandle kokuphazamiseka kweMveli.
Iikhodi ze-ID zangempela kunye neNkohlakalo
Sivelisa iiCards zeNtsholongwane kunye neNtshonkco. KwiiKhadi zeAzisi zangempela, sibhalisa yonke ingcaciso kwinkqubo yedatha kwaye ukuba iiKhadi zeAzisi zihlolwe ngokusebenzisa umshini wokufunda idatha, yonke inkcazelo yakho iya kubonakala kwinkqubo kwaye usebenzise ngokusemthethweni loxwebhu. Siphinde sivelise iiCards zeeNgcaciso zeeNgcaciso ezifanayo kunye nee-Cards ze-ID zangempela. Kodwa akukho nkcazelo yolu xwebhu iya kubhalwa kwinkqubo yedatha. Ngoko uxwebhu aluyi kubhaliswa. Kodwa zonke iimpawu ezifihlakeleyo zeKhadi leNgcaciso ziya kuphinda zifakwe kwi-Fake copy. Ngoko sihlala sicetyiswa kubaxhasi bethu ukuba sibavezele amaxwebhu angempela ukuba bafuna ngokusemthethweni ukusebenzisa loxwebhu.
Copyright Universaldocumentation.com © Wonke amalungelo agcinwe.
Molo apho! Cofa omnye wabameli bethu ngaphantsi kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza.
umlawuli	Support Team
Cofa apha ukuthetha